Madixii howlgelinta Alshabaab ee gobolka Hiiraan oo ladiley. – Radio Daljir
Agoosto 13, 2016 1:55 b 0
Beledweyne, Aug 13 2016–Sida ay ilo wareedyo xaqiijiyeen waxaa xalay gobolka Hiiraan lagu diley madaxii howlgelinta Ururka Al Shabaab ugu qaabilsanaa Gobolka Hiiraan, kadib markii dagaal ka dhacay deegaanka Luuq jeelow lagu dilay Sarkaalkaasi.
Sarkaalkaan katirsanaa ururka Alshabaab ayaa waxaa lagu diley dagaal dhexmaray maleeyshiyaad taabacsan dowladda federalka ah ee Soomaaliya iyo ururka Alshabaab habeenkii xalay.
Maleeshiyaadka hubaysan ayaa Sarkaalkaan waxa ay ku dileen deegaanka Luuq Jeelow oo ku yaalo Galbeedka Magaalada Baledweyne, inkasta oo Alshabaab aysan arrinkaasi kahadlin.
Sarkaalkaan katirsanaa Alshabaab ee ladiley ayaa lagu magacaabijirey Cabdi Aaden, wuxuuna Shabaabka u qaabilsanaa howlgelinta ciidamada Shabaabka ee Gobolka Hiiraan, waxaa lala dilay Sarkaalkaan labo kale oo Shabaab ka tirsan.
DHEGEYSO-Puntland oo dhalinyarada shaqo abuur u samaynaysa.